Kusungulwe indlela ebizwa ngeStreet Law Project yokubheka indlela umthetho ongasebenza ngayo uma kuziwa kwezocwaningo nokuhlaziya izimo ezweni lakithi, engaphansi kwe-Independent Medico Legal Unit (IMLU) yaseNingizimu Afrika. Lapha u-Akoojee uyiForensic consultant, umqeqeshi nomcwaningi.
U-Akoojee uthe ukwazi ngokwelapha kwezokuhlaziya kuyasiza ekuqondeni ukukhubazeka kwemvelaphi yomuntu. Uthe ukufaka ezokuhlaziya kwenza abezomthetho nabezokwelapha babe ngongcweti ngokukhula kwengane engakazalwa nencane esanda kuzalwa.
Ukuba nogqozi kwezokuhlaziya kwezimo kanye nePhysical Anthropology kwenze u- Akoojee abonakale ebamba iqhaza ekukhulisweni kwamakhono nasekuqeqesheni emikhakheni yeClinical Forensic Medicine neForensic Pathology, nabasebenza ngalokhu kwezempilo nabezomthetho. U-Akoojee wayeyiChief Specialist for Forensic Services and Bioethics eMnyangweni wezeMpilo KwaZulu-Natali aphinde abe umseshi we-Anatomy esifundazweni.
Inkulumo ka-Akoojee bekungukuthi aqale izingxoxo, nanokuthi aqale futhi agqugquzele ucwaningo kulomkhakha. Kuthenjwa ukuthi kuzoba nemiphumela ezosiza kusungulwe izindlela ezizosebenza eNingizimu Afrika. Abebekhona bakhombise ukuyithanda lenkulumo bafuna nokuqala iqembu locwaningo kulomkhakha.
Uthe ukufunda ngalokhu kungasungula kuphinde kwandise izindlela ezikhona eNingizimu Afrika, kuphinde kuqhathaniswe nezinye izinto zokuthola unyaka wengane engakafiki esikhathi sokuzalwa. Nabacwaningi bangaqala ukubheka izindlela ekungenziwa ngazo eNingizimu Afrika.
Iqembu lalencwadi yocwaningo liphinde lalalela uDkt Edwin Naidu noDkt Adeyinka Alabi abenza izifundo zeMasters neDoctrate abethule ucwaningo lwabo.
UDkt Okpara Azu oyiSenior Lecturer esikoleni seLaboratory Medicine neMedical Sciences uthe bazokwandisa ucwaningo, ukufunda nokufundisa kwabo. ‘Sihlele ukwandisa lokhu ngokumema abantu abahamba phambili, izinkampani neminyango emhlabeni wonke ukuthi bafike bazosipha ulwazi lwabo.’
author email : memlal@ukzn.ac.za